Alice Bah Kunke oo dhallinyaro Rosengård ka timid xafiiskeeda ku qaabishay - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Alice Bah Kunke oo dhallinyaro Rosengård ka timid xafiiskeeda ku qaabishay
La daabacay fredag 20 februari 2015 kl 13.38
Rosengård till rosenbad
Qaar ka mid ah dhallinyarada oo isku diyaarinaya la kulanka wasiiradda dhanka iyo demokrati ministern. Facebook: Warsame Elmi/SR
Todobaadkan dhowr dhallinyaro ah oo dhigata dugsiga sare ee Gymnasium kana timid xaafadda Rosengård ee magaalda Malmö ayaa booqasho ku timid Stockholm si ay wax uga bartaan sida loo maamulo dalka.
Waxayna booqdeen baarlamaanka dalka oo halkas kula kulmeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka. Waxay sidoo kale la kulmeen wasiirka dhaqanka iyo demokratiyadda Ales Bah Kunke.
Dhallinyarada oo isku jirtay gabdho iyo wiilal garayeyna tobaneeyo, dhamaantood ka yimid xaafadda Rosengård magaalada Malmö ayaa waxaa xaafiiskeeda ku qaabishay wasiiradda dhanka iyo demokraatiyadda Alice Bah Kunke. Wasiiradda ayaa dhallinyarada ogaysiisey in ay iyaduba ku dhalay xaafadda Rosengård imminka tahay wasiiradd xafiiskeeda yahay aqalka madaxtoodayada ee Rosenbad.
Wasiiradda ayaa dhllinyarada uga sheekeysay wax u sahlay in ay maanta noqoto wasiiradda ka tirsan dowladda Sweden iyada oo tiri ”waayo aragnimada ugu muhiimsan ee halkan ku gaaray waxaa u sabab ah ka qaybgalkeyga ururada bulshada rayidka ah, waxbarashada waa muhim laakiin sidoo kale waxaa muhim ah ka qaybgalka arrimaha bulshada”.
Zaynab oo ka mid ah dhallinyarada ayaa weydiisey wasiiradda sida marka ay shaqaalo qoranayaan hey’adda muhimka ah sida wasaaradda dhanka ay sameyso si loo helo shaqaalo kalo gedisan oo matala qaybaha kalo gedisan ee bulsahda.
Iyada oo wasiiradda u sheegtay su’aalshaas tahay mid muhim ah oo ayna iyadda wasiirad ahaan xiiseyneyso si wasaaradeeda u noqon laheyd mid ay dhamaan bulshada qaybahaeeda kalo gedisan kawada muuqan lahaayeen. Iyadoo dhallinyarada ku boorisay in ay shaqo ka soo dalbadaan wasaaradeeda iyo weliba wasaaradaha iyo hey’addaha kale ee dalka. Ugu yaraan ay soo dalbadaan shaqo lays marka ay billaabaan jamacaddaha.
Dhallinyarada waxay sidoo kale booqdeen baarlamaanka dalka, iyada oo uu dhismaha baarlamaanka ku soo wareejiyey xildhibaan da’diisa tahay 23 sanno jir, waddanka qaxootinimo ku imaaday isagoo 9 sanno jir ah.
Cabdi Xakim Adan oo hogaaminayey dhallinyarada ka timid Rosengård kana socda ururka Somalilandföreningen ayaa sheegayn in socdaalkooda la xiriiro mashruux lagu barayo dhallinyarada sidii ay uga qaybqaadan lahaayeen arrimaha bulshada iyo weliba sida dalka loo maamulom, si dhallinyradan ayaaha danbe ugu qaybqaadan lahaayeen maamulka dalka.